Umhla My Pet » Job Indoda Ngaba Zibonisa njani Ubuntu bakhe Romantic
Kulungile, ukuze uyazi ngeenkwenkwezi sele isetyenziswe njani kwasemaphakadeni ukuvavanya iimpawu baqikelele ehambelanayo esekelwe phezu ulungelelwaniso iiplanethi?
... On izinto ezifana xa uzelwe nokuba wena i "uphawu yamanzi" okanye "umqondiso ilanga?"
kakuhle, Ndiye ndaba inkqubo efanayo esekelwe phezu labo Ithuba ukugonwa ngayo.
Ilungile lo nto: kumnombo wakhe msebenzi ibonise ukuba okanye hayi ababini kuni uya "umsebenzi" kwi ukuthandana kunye nenkunzi kwibala.
Nangona le nkqubo ukuze ningabi kakhulu "lwenzululwazi,"Semthethweni isekelwe phezu bunokulolongeka ebanzi, ukucamangca, utoliko, ndlebe kunye nokuchitha ixesha kunye intsimi kumaxwebhu mbalwa "iimpuku."
Ukuba ufuna ukuthatha inxalenye yomsebenzi guess ngaphandle ngubani ukuba uzidibanisa ngokuphumelelayo, kunye neziphumo luhleli, ufunde kwaye sithobele.
ABABHALI KUNYE ziimbongi (Uhlobo artsy)
Aba bantu badla ukuba liphupha, ngothando, kwaye bathathe. Babubone iglasi engumzekeliso nesiqingatha ngokupheleleyo. Bona badla conversationalist kakhulu, kwaye ngokwenene iisms ukubutha naba-. Bona sele uguqulelo eyindoda nomhlobo wakho osenyongweni. kodwa yilumkele: ezi "oomoya ivideo" maxa wambi kuba ukuzibophelela ngokuthi- kwaye shwaka.
Ukuba niyathandana utitshala, bafudukele kwentloko eklasini.
Nangona kukho ezinye Niyazi ukuba umthetho, abantu abafundisa bakutshelwe uhlobo, isigulane, okulungileyo kunye nezilwanyana kunye nabantwana, kwaye i "ukufunda ngokukhawuleza." Yongeza koku nento yokuba bazizikhulu multi-taskers ngezakhono ngasentla nokuqiqa avareji.
Zimali kunye AMANANI CRUNCHERS
Amadoda kolu didi idla uhlobo endala. Unako "ukubala" lisenziwa iinkcukacha elihlenga ezi Cuties, nokufika ngexesha, kunye pinchers imali kwakunye. Baye imigangatho obungqabangqaba. Ukuba kungena namabhongo, ethe-ethe shinyi,, uhlobo aluncedo, uza kufumana ulonwabo apha.
MAPOLISA, mlilo, Nabongikazi MALE
Yintoni nemazi akayithandi ukuba "wamhlangula?"Aziwa Guys kula macandelo ukukhalipha, khusela, njengegunya, kunye nenkathalo. Kwaye khankanya ukuba sele ngokuqhelekileyo zikwimeko entle emzimbeni? Inkoliso utsaleleka kubantu kakhulu, ngemvo yimbeko kunye noxanduva.
Uya kufumanisa ukuba amaqabane "ezilinganayo" kulwalamano.
Uya unqakraza aba bafo ukuba sele kusengqiqweni, kwaziswa, bathule, kwaye zokusombulula ingxaki; ke kakhulu.
THE elinesifo ABANGAQESHWANGA
Nantsi eyona nyaniso, sonke siyazi okanye umhla othile kolu didi.
"Umsebenzi" wakhe wokubamba njenge esofeni.
Uye nangoku uzama 'ukufumana ngokwakhe. "Okanye usoloko phantsi thamsanqa. Okanye nangoku uzama ukulandela iphupha lakhe lokuba inkwenkwezi eliweni ezingamashumi. Kunene? Ukuba kunjalo, ungafuna ukuqwalasela iinketho zakho "isiliphu pink" naye ngokukhawuleza.
Yomqala LUHLAZA VS. IKHOLA EMHLOPHE–Kukuphi na okulunge?
izigqibo, izigqibo. Yintoni intombazana ukwenza?
Ngcono ga inekhola indoda ebhlowu okanye ikhola lanham emhlophe?
kakuhle, konke kuxhomekeke.
guys ikhola Blue badla phantsi emhlabeni olungileyo ngezandla zabo. Bona sele ngokuqhelekileyo kulula ukuba abe, kunye matshamba ukuziqinisa. kuthelekiswa, akuhambi ngokubanzi umva ngaphezulu.
guys White ingqosha amaxesha amaninzi zibalulekileyo usamkela, bakholisa ukuba unesigulo, kwaye zokusombulula kakhulu ingxaki.
Nangona ezi hayi imithetho nzima yaye ngokukhawuleza, uza kubafumana kusebenza kwiimeko ezininzi ukuthandana. Nokuba wenza ntoni na, ukukhetha ngobulumko.
Emveni kwakho konke, uthando "ishishini." ebalulekileyo